Moto nifatratra tamin’ny fiara teo alohany: maty tsy tra-drano ilay tovolahy, iray hafa naratra mafy | NewsMada
Nifatratra ary nidona mafy tamin’ilay fiara teo alohany ilay moto. Izay no nahatonga ity lozam-pifamoivoizana mahatsiravina, nitranga tetsy amin’ny tetezana Andranomena, omaly tolakandro ity. Nandriaka ny ra. Naratra mafy vokatr’izany ilay nitondra moto, raha maty tsy-drano kosa ilay niaraka taminy.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny amin’ny tetezan’Andranomena, omaly tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro. Nidona mafy tamina fiara teo anoloany, tamin’izany, ireo mpandeha moto ka nianjera mafy. Vokany, maty tsy tra-drano ny lehilahy iray, tokony ho 40 taona raha naratra mafy kosa ilay namany nitondra moto.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa nifanena tamina kamiaobe iray nitondra « bidons » ity moto ity raha iny nihazo an’Andranomena iny. Niala lavaka teny an-toerana anefa ny mpamily ny fiara vaventy ka nilatsaka tamin’izany ireo « bidons » noentiny. Teo anoloan’ilay moto kosa, nisy fiara tsy mataho-dalana iray. Nandritra ny filatsahan’ireo « bidons », niala izany ilay fiara 4×4 ka nijanona tampoka. « Vokany, tsy tafajanona ireo mpandeha moto, izay nandefa mafy ka nidona tampoka tamin’ilay fiara tsy mataho-dalana ary nianjera », hoy ny fanazavan’ny polisy. Tsy naharo azy ireo ny aroloha nanaovany ka naratra mafy nandritra izay ny mpitondra ny moto raha maty tsy tra-drano kosa ilay namany.
Anaovana famotorana ireo mpamily
Fotoana fohy taorian’ny loza, tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana. Nanaovana fanadihadiana eny anivon’ny polisy misahana ny fifamoivoizana eny Tsaralalana tamin’izany ireo mpamily roa tonta, an’ilay fiara vaventy sy ilay 4×4. Ilay naratra kosa noentina novonjena eny anivon’ny toeram-pitsaboana. Raha naterina ao amin’ny tranom-patin’ny HJRA kosa ilay namoy ny ainy.
Ankoatra izay, nitrangana lozam-pifamoivoizana koa teny 67ha atsimo, ny alahady teo tokony ho tamin’ny 03 ora tolakandro. Naratra tamin’izany ny lehilahy iray nitondra moto raha nisongona fiara Sprinter teo anoloany. Vokany, simba ilay moto ary vaky koa ny jiron’ilay fiara. Nentina teny amin’ny HJRA avy hatrany ilay naratra, nisokatra nanaraka izay koa ny fanadihadiana.